ပြန်ပြေလည်သွားတဲ့ လူကာကူ ၊ ရောက်ရောက်ချင်း ကိုဗစ်နဲ့ ထွင်းတဲ့ တောရက်စ် ၊ အငြင်းခံလိုက်ရတဲ့ နယူးကာဆယ်တို့နဲ့နံနက်ခင်းအားကစားသတင်းများ - xyznews.co
ပြန်ပြေလည်သွားတဲ့ လူကာကူ ၊ ရောက်ရောက်ချင်း ကိုဗစ်နဲ့ ထွင်းတဲ့ တောရက်စ် ၊ အငြင်းခံလိုက်ရတဲ့ နယူးကာဆယ်တို့နဲ့နံနက်ခင်းအားကစားသတင်းများ
January 4, 2022 January 4, 2022 - by Editor
ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီး ရိုမီရို လူကာကူ ဟာ မနေ့က အသင်းရဲ့ အကြီးအကဲတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောဆို ခဲ့ပြီး အပေါင်း လက္ခဏာဆောင်ခဲ့တယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှု အပြီးမှာ လူကာကူ ဟာ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းခဲ့ပြီး အထူးကြိုးစား ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ချဲလ်ဆီး ရဲ့ လာမယ့် ပွဲစဉ် မှာ လူကာကူ ကို လူစာရင်းမှာ ပြန်လည် မြင်တွေ့ ရနိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ ဝါရင့် ခံစစ်မှူးကြီး သီယာဂို ဆေးလ်ဗား ကိုလည်း တနှစ် စာချုပ် သက်တမ်း တိုးနိုင် ခဲ့တယ်လို့ ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ကစားသမား မစ်ချယ် ခွီဆန့် ဟာ အီတလီ ကလပ် ဗီနီဇီယာ အသင်းဆီ ယူရို ၄.၅ သန်း နဲ့ အပြီးသတ် ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ပြီလို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး ကနေ ဘာစီလိုနာ ကို ပြောင်းရွှေ့ လာတဲ့ ဖာရန် တောရက်စ် ဟာ မနေ့က အသင်းသစ် နဲ့ စတင် မိတ်ဆက် ခဲ့ပြီး လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိနောက်ပိုင်း ဆေးစစ်ရာမှာတော့ တောရက်စ် နဲ့ ပီဒရီ တို့ဟာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ တွေ့ရှိ ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဥက္ကဌ လာပေါ်တာ ကတော့ နောက်ထပ် ခေါ်ယူမှုတွေ ထပ်လာဦးမယ့် အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ သလို သူတို့ဟာ ဘာစီလိုနာ ကို အသင်းကြီး တသင်း ပြန်ဖြစ်လာဖို့ တည်ဆောက် နေကြောင်းလည်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစားသွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ဝုဗ် အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် ဟာ ကစားပုံ ရေရေ ရာရာ မရှိခဲ့ဘဲ ဝုဗ် ဂိုးဘက်ကို ၂ ကြိမ်သာ ဂိုးပေါက် တည့်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီရှုံးပွဲ ကြောင့် အဆင့် ၅ နေရာကို တက်ရောက် နိုင်ခွင့်ကို ယူနိုက်တက်တို့ ဆုံးရှုံးပြီး အဆင့် ၇ မှာသာ ဆက်ရှိ နေခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် ရှုံးထွက် ဖလားပွဲ မှာတော့ PSG ဟာ အမ်ဘာပေ ရဲ့ ဟက်ထရစ် နဲ့ အတူ ဗန်းနက်စ် အသင်းကို ၄-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်းဟာ ထရစ်ပီယာ အင်္ဂလန် ကို ပြန်သွားပါက ချဲလ်ဆီး နောက်ခံလူ အက်ဇ်ပီလီ ကွီတာ ကို ချဉ်းကပ် သွားဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ဒီရက် အတွင်းမှာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ နွေရာသီမှာ စာချုပ် ကုန်ဆုံးမယ့် ဒိန်းမတ် နောက်ခံလူ ခရစ်ရှန်ဆန် ကို တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
နှလုံးခုန်စက် တပ်ထားရတာကြောင့် အီတလီ မှာ ဘောလုံးဆက် ကစားလို့ မရတော့တဲ့ ဒိန်းမတ် ကွင်းလယ်လူ အဲရစ်ဆင် ဟာ လာမယ့် အပတ် အတွင်းမှာ အင်္ဂလန် ကို လာရောက်ပြီး ကလပ် အသင်း အချို့ နဲ့ ဆက်သွယ် တွေ့ဆုံဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ကတော့ ဇန်နဝါရီ ရဲ့ ပထမဆုံး လှုပ်ရှားမှုလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု တခုကို ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် စဗန် ဘော့မန်း အတွက် ပေါင် သန်း ၃၀ နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို လိုင်လီ အသင်းက ပယ်ချ လိုက်ပြီး နယ်သာလန် နောက်ခံလူဟာ ရောင်းထုတ်မယ့် ကစားသမား မဟုတ်ဘူးလို့ အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ် လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . .
Previous Article နှစ်သစ်ကို ၃ မှတ်အလှူ နဲ့ စဖွင့်ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ရှုံးပွဲက ပြောချင်စရာ အချက်များ
Next Article အနူတောမှာ လူချောဖြစ်တဲ့ ဖီးလ်ဂျုံးစ် ၊ ဝုဗ် နဲ့ ပွဲက သရဲနီ တို့ရဲ့ Rating များ